Mety hanavotra ny tokatandroka tavaratra fotsy ve ny fanomezan-taranaka in-vitro? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2018 7:45 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, 日本語, 繁體中文, Italiano, عربي, English
Tamin'ny 19 martsa 2018, nisaona ny fahafatesan'ilay rhinocéros tavaratra fotsifotsy 45 taona, antsoina hoe Sudan ireo mpiaro biby, iray tamin'ireo tokatandroka lahy fotsifotsy tavaratra telo farany sisa tavela sy ny hany sisa velona i Sudan. Nohafainganan'ireo (euthanasie) mpiambina ao amin'ny Ol Pejeta Conservancy any Kenya, izay nonenan'i Sodana ny fahafatesan'ilay tokatandroka noho ny fijaliany amin'ny fahanterany.
Noho ny fahalasanan'i Sudan, roa monja sisa ny tokatandroka tavaratra fotsy sisa tavela eto amin'izao tontolo izao – izay samy vavy ary ampahany amin'ny ràn'i Sudan – zanany vavy Najin sy zafikeliny Fatu. Manantena ny fitohizan-taranak'ireo biby ireo ny mpahay siansa ankehitriny amin'ny alalan'ny dingana fanomezan-taranaka in-vitro izay mampiadihevitra be.
Efa namokatra tsaika safiotra (embryons hybrides) tamim-pahombiazana ireo mpikaroka tamin'ny fampiasana atody mbola tsy foy nalaina tamin'ireo rhino vavy fotsy tatsimo mifanakaiky, nakambana tamin'ny tsirinaina nampangatsiahina avy amin'ireo rhino lahy tavaratra efa maty. Sambany, tonga tamin'ny dingana “blastocyste” tao amin'ny laboratoara ilay tsaika avy amin'izany, manome fanantenana ho an'ireo mpahay siansa amin'ny fiarovana ny tokatandroka fotsy tavaratra tsy ho lany tamingana.
Na dia tezitra mafy tamin'ny fahalasan'ilay rhino lahy #Sudan sisa tavela aza isika, dia hitako (ahoana no hilazana azy?) fa te-hanangona vola 9 tapitrisa dolara ho amin'ny dingana FIV mba hiarovana biby (izay hahita fomba hamonoana azy ireo foana ny mpihaza).
Vondrona mpikatroka Save the Rhino nanoratra fanambarana mikasika ilay fikarakarana mampiady hevitra:
Zatra nandehandeha teny amin'ny faritr'i Oganda, Tshady, Sodana, Repoblikan'i Afrika Afovoany, ary ny Repoblika Demaokratikan'i Kongo ireo tokatandroka tavaratra fotsy (zana-karazana tokatandroka fotsy), saingy ringana tany an'ala izy ireo ankehitriny noho ny fihazana sy ny ady an-trano nandritra ny taona maro.
Amin'ny ankapobeny, nihena be tao anatin'ny taona vitsivitsy ny isan'ireo rhino – na inona na inona karazana, voalohany indrindra dia noho ny fangatahana ny tandrok'izy ireo. Any amin'ny firenena Aziatika sasany, mihevitra ny olona fa afaka manasitrana tazo sy aretim-po ny trandrok'izy ireo. Any amin'ny faritra hafa, heverina fa mariky ny harena ny tandroka.
Raha mbola mitohy ny adihevitra momba ny FIV, niteraka fanentanana teo amin'ny vahoaka mikasika ny manjo ireo tokatandroka manerana ny kaontinanta Afrikana ny fahafatesan'i Sudan. Zimbaboe, ohatra, dia ahitana tokatandroka fotsy sy tokatandroka mainty. Toy izao avy ny isan'ireo tokatandroka tamin'ny taona 2009, miisa 425 ny tokatandroka mainty ary 300 ny tokatandroka fotsy nirenireny manerana ny valan-javaboaharim-pirenena Zimbaboeana sy ny valan-javaboahary tsy miankina.
Mba hampitsaharana ny famonoana sy ny fitrandrahana bibidia tsy ara-dalàna, nametraka fiarovana ara-pitsarana ho azy ireo ny governemanta Zimbaboeana, araka ny fehezan-dalàna voalazan'ny lalàna Parks & Wild Life Act [Chapter 20:14] (PWA), izay ahitana sazy henjana ho an'ny fandikan-dalàna. Sokajiana ho toy ny “biby arovana manokana” -ny tokatandroka ankehitriny, voaràra ny fihazana sy ny famonoana azy ireo, ary hiharan'ny sazy sivy taona an-tranomaizina amin'ny fanamelohana voalohany, sy sazy an-tranomaizina 11 taona amin'ny fanamelohana faharoa ireo mpandika lalàna.
Na dia eo aza ny sazy henjana, dia mbola vonona hanao sorona ny ainy ireo mpihaza saingy avy eo lasa mpikatroka amin'ny tambajotran-jiolahy voalamina. Betsaka ireo mahantra, tsy an'asa, voasariky ny fampanantenana ara-bola amin'ny fihazana. Tsy maintsy ahitana (na indraindray tsia) fisamborana ireo atidoha mikotrika izany ady amin'ny varotra biby tsy ara-dalàna izany.
Mitaky fanagiazana ny fitaovana rehetra, ny fiara na fitaovam-piadiana ampiasaina amin'ny fandikan-dalàna amin'ireo bibidia ny lalàna PWA, manome zo ho an'ny fanjakana mba haka sy hampiasa izany, saingy na dia eo aza ireo fiarovana araka ny lalàna ireo, tara loatra ny fahatongavan'ny fiovana ary voafetran'ny tsy fahampian'ny famatsiam-bola, sy ny fampiharana marefo ny lalàna ary ny kolikoly.
Gazety iray mpivoaka isan'andro any Afrika Atsimo, Daily Maverick, nitatitra fa misy fifamatorana amin'ny varotra tandroka rhino tsy ara-dalàna ny kolikoly, tsy any Zimbaboe ihany fa any amin'ny firenena afrikana valo hafa.
Ao Zimbabwe, izay latsaky ny 23 taona ny 62 isanjaton'ny mponina, ny fanantenana dia hanana anjara asa lehibe ao anatin'ity fikatrohana ity ny tanora. Na izany aza, satria betsaka kokoa ny isan'ny tanora mandany fotoana betsaka an-tserasera fa tsy mivoaka ho any amin'ny natiora, tsy maintsy mifantoka betsaka amin'ny famerenana ny tanora amin'ny ady hiarovana ny tokatandroka ireo mpikatroka.
Amin'ny maha karazana elo, ampahan'ny tontolo voajanahary manankarena izay misy fiantraikany mivantana amin'ny hatsaran'ny fiainana eo amin'ireo karazam-biby hafa ny fiainana andavanandron'ny tokatandroka. Ny tanim-bilon'izy ireo, ohatra, dia mitazona ny ahitra ho fohy, mahatonga ny tany ho mora hivezivezen'ireo biby madinika mampinono
Na dia miaiky aza ireo mpahay siansa fa ampahany voajanahary amin'ny fivoarana ny ho lany tamingana, mitombo haingana kokoa izany noho ny fihazana, ny fandringanana ny tontolo iainan'ny tokatandroka, ny fitrandrahana tafahoatra ny fiainan-dia, ary koa ny disadisa ara-politika. Hisy fiantraikany goavana eo amin'ireo karazam-biby hafa ny fahafonganan'ny tokatandroka, ary fampahatsiahivana miharihary ny fahalasan'i Sudan.